ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: April 2013
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၁၅၃ ဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ)မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုရဲမင်းဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန်အတွက် ဆုတောင်းပွဲတခုကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရား မြောက်ဘက်မုခ် အောင်မြေ၌် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့ ညနေ ၆း၀၀ အချိန်တွင် သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ စုဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုတောင်းပွဲကို ကိုရဲမင်းဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲ စာရွက်များကိုင်ဆောင်၍ ရွှေတိဂုံဘုရားအား လက်ယာရစ် လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အောင်မြေ၌ မောရသုတ် ရွတ်ဆို၍ ဆီမီး ထွန်းညှိဆုတောင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါဆုတောင်းပွဲသို့ အစိုးရ အာဏာပိုင်(SB)များမှ သံဃာတော်များ ခေါ်ဆောင်လာ၍ တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:08 PM No comments :
MONGOLIA Geremek Award ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ Geremek Award ဆုယူပွဲ မိန့်ခွန်း (29-4-2013)
စာရေးသူ Unknown အချိန် 5:34 AM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:31 PM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:20 PM No comments :
The ASEAN 100 Leadership Forum isaunique high-level meeting of next-wave leaders in business, government and civil society who will shape the future of ASEAN. The ASEAN 100 Oration isaspecial address delivered byahighly distinguished Southeast Asian. The 2012 ASEAN 100 Oration was delivered by Daw Aung San Suu Kyi, Nobel Laureate and Chairperson of the National League for Democracy. Find out more at www.asean100forum.com.
စာရေးသူ Unknown အချိန် 2:10 AM No comments :
စာရေးသူ Unknown အချိန် 6:30 AM No comments :